CalenTile waxay muujineysaa dhacdada xigta ee Gaaritaanka Degdegga ah | Androidsis
Sida loo muujiyo dhacdooyinka jadwalka xiga ee ku saabsan Nidaamka Degdegga ah ee Android
Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed ee Android waxay gaartaa xadka aan lagaranayn waana hadda markaan awoodno ka eeg dhacdada xigta goobaha deg degga ah ee Android ee jadwalka taariikhda ee aan ku hayno ajandaheena.
Haa, guddigaas taas oo aan ka joojin karno waxyaabaha sida Bluetooth ama GPS-ka, waxaan ku dari karnaa astaan ​​na tuseysa goorta ay dhacdo kaleendarka ee soo socota aan yeelan doono. Habka xiisaha leh ee xiisaha leh ee loo habeeyo guddigaas marinka degdegga ah u siiya ciyaaro badan sida aad arki karto.
1 CalenTile si aad uga eegto dhacdooyinka kalandarka Nidaamyada Degdegga ah
2 Fikrad shaqeyneysa
3 Qaar ka mid ah faa'iidooyinkeeda
CalenTile si aad uga eegto dhacdooyinka kalandarka Nidaamyada Degdegga ah
Habayntaa aan u adeegsan doonno barnaamij heer sare ah oo la yiraahdo CalenTile iyo in qiimaha ugu yar ee € 0,99 uu na siin doono khibrad xamaasad leh si aan "wax" kale ugu siino booskaas hagaajinta degdegga ah.
Waxaad horeyba u ogayd inaad dib u dhigan karto oo aad ku meeleyn karto astaamo cusub oo gaagaaban meeshaas, markaa barnaamijkan ayaa mas'uul ka ah inuu na siiyo mid cusub oo waan ka heli karnaa meesha aan doono sidaa darteed, mar kasta oo aan ballaarinno guddiga ogeysiinta si aan markaa u dheereynno toobiyeyaasha, waxaan arki karnaa magaca iyo taariikhda dhacdada xigta.
Way iska cadahay inay tahay qaabayn aad u cad oo nooc nooc ah adeegsade ah oo ubaahan wax sidan oo kale ah, maadaama isticmaalaha caadiga ah ee haysta jadwal yar oo mashquul ah, xitaa xiiso uma lahan in la adeegsan karo aalad. Laakiin noqo sida ay dhici karto, barnaamijkan oo la yiraahdo CalenTile us wuxuu siinayaa bedel u noqosho u leh dhacdooyinka soo socda adigoon haysan ogeysiis kale ama widget ah.
Sida aan soo sheegnay, haddii aadan ka mid ahayn kuwa leh aaladda kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka, CalenTile waa beddel ku habboon oo lagu meeleeyo dhacdooyinka kalandarka soo socda ee meel aan la fileynin.
Waa wax iska caadi ah fududahay in la rakibo CalenTile si aan u tuso dhacdooyinka:
Waxaan ku rakibnay CalenTile hal lacag bixin oo ah € 0,69:
CalenTile - Jadwalka Kala-Bixinta Degdegga ah
Developer: Barnaamijyada Gustavo
Waxaan aadeynaa helitaanka degdegga ah ee goobaha xagga sare ee guddiga ogeysiiska oo guji astaanta qalin si aad ugu gudubto u qaabeynta
Waxaan jiideynaa astaanta CalenTile oo waxaan dhigeynaa meesha aan dooneyno inaan mar walba marin u helno
Guji astaanta CalenTile waana inaan ku siino ogolaansho inaad ku gasho kalandarkayaga
Sida ugu fudud ee talaabooyinkaas in barnaamijkan mar hore loo qaabeeyey, kaas oo ficil ahaan ku saleysan muujinta dhacdada Kalanda ee soo socota. Markii horeba loo qaabeeyey, markaad gujiso, furi doonaa kaarka macluumaadka faahfaahinta munaasabadda.
Dhamaan faahfaahinta laxiriira muuqan doona sida sharaxaada, shabakada, goobta ama ku celcelintiisa, markaa waxay noqoneysaa fikrad aad u fiican oo si fiican nooga reebtay iyadoo la adeegsanayo guddi aan inta badan ku wajahanno si aan u dhaqaajino dhammaan walxaha mobilada sida Akhriska Akhriska, GPS ama isla Xiriirka Wadaagga ah.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinkeeda
Midka hore ayaa ah uma baahnin inaan kuxidho kumbuyuutarka dusha sare inaad sameyso la'aanteed oo aad marin toos ah ugu hesho barnaamijka Kalandarka si aad u abaabusho. Faa'iidada labaad ee ah faa iidooyinka waa inaanan u baahnayn inaan jadwal kale furno oo tilmaam hoose ayaan ogaan karnaa waa maxay dhacdada xigta ee innagu soo food leh.
La saddexaad waa qiimaha € 0,69 oo loogu talagalay barnaamij bixiya beddel aad u gaar ah oo hubiya inaanan xitaa u baahnayn inaan aragno xayeysiis noocan oo kale ah oo aan badiyaa u isticmaalno inuu na siiyo xal gaar ah.
Marka la soo koobo, maxaa CalenTile waxay awood u leedahay inay ku bixiso khibrad gaar ah gudiga marinka degdega ah ee Android si aad u aragto dhacdooyinka soo socda ee aan ku qabno jadwalka. Qalab weyn oo loogu talagalay barnaamijyada kalandarka sida isla Google.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo muujiyo dhacdooyinka jadwalka xiga ee ku saabsan Nidaamka Degdegga ah ee Android
Barnaamijyo lagu barto sida loo sawiro
Hadda waxaa laga heli karaa 'Raadi khadka' dhammaan Samsung Galaxy oo leh Android 10